Liiska: Shan Ciyaarahan Oo Barcelona La Xiriirtay Si Ay Ula Wareegto Xagaaga
HomeWararka CiyaarahaLiiska: Shan Ciyaarahan oo Barcelona la Xiriirtay si ay ula Wareegto Xagaaga
February 11, 2022 Wararka Ciyaaraha, Horyaalka Germalka, Horyaalka Ingiriiska, Horyaalka Italy, Horyaalka Spain, Suuqa kala iibsiga 0
Barcelona ayaa lagu soo waramayaa in ay wax ka waydiisay shan ciyaartoy oo ay ku jiraan saddex daafac oo Chelsea ah ka hor suuqa kala iibsiga xagaagan.
Kooxda reer Catalan, oo sameysay seddex saxiix bishii Janaayo, ayaa durba isku diyaarineysa inay xoojiso kooxdeeda, waxaana ay diyaarisay liis bartilmaameed ah ka hor ololaha 2022-23.
Weeraryahanka Borussia Dortmund Erling Braut Haaland ayaa la rumeysan yahay inuu yahay bartilmaameedka koowaad ee Barca, inkastoo ay qarka u saaran yihiin inay tartan adag kala kulmaan kooxaha sida Real Madrid , Manchester City , Manchester United iyo Paris Saint-Germain oo ku aaddan adeegyada Norway.
Tababaraha kooxda Xavi ayaa sidoo kale doonaya inuu xoojiyo daafaciisa iyo khadka dhexe xagaaga, ESPN ayaa werrineysa in Barcelona ay xiriir la sameysay Chelsea oo ku saabsan helitaanka Cesar Azpilicueta , Marcos Alonso iyo Andreas Christensen .
Azpilicueta iyo Christensen ayaa labadooduba qandaraaskoodu dhacayaa xagaaga, waxaana ay hadda ka wada xaajoon karaan heshiisyo horudhac ah oo ay la galaan kooxo ajnabi ah, halka Alonso uu qandaraaskiisa Stamford Bridge ka harsan yahay wax ka yar 18 bilood.
Warbixinta ayaa intaa ku dartay in Barca ay sidoo kale wax ka weydiisay daafaca bidix ee Valencia Jose Gaya iyo ciyaaryahanka khadka dhexe ee AC Milan Franck Kessie .
Gaya ayaa la rumeysan yahay inuu yahay bartilmaameedka daafaca bidix ee uu doorbidayo Xavi, isagoo ka horeeya Alonso, waxaana uu u arkaa bedelka mustaqbalka fog ee Jordi Alba , halka wadahadaladii ugu horeeyay ay la yeesheen Kessie, kaasoo ay ka harsan tahay wax ka yar shan bilood. qandaraaska San Siro.